अन्ततः बिदेशमा रहेका नेपाली फर्काउने प्रतिबद्धता पुरा गर्दै सरकार, यस्तो छ निर्णय! – PathivaraOnline
Home > समाचार > अन्ततः बिदेशमा रहेका नेपाली फर्काउने प्रतिबद्धता पुरा गर्दै सरकार, यस्तो छ निर्णय!
अन्ततः बिदेशमा रहेका नेपाली फर्काउने प्रतिबद्धता पुरा गर्दै सरकार, यस्तो छ निर्णय!
admin June 4, 2020 June 4, 2020 समाचार 0
सरकारले प्रतिवद्धता गरे अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउने काम सुरु भएको छ । शुक्रवार वर्मावाट पहिलो चरणमा २६ जना नेपाली स्वदेश फर्कदै छन् । कोरोनाका कारण विदेशमा अप्ठेरो अवस्थामा रहेका नेपाली स्वदेश फर्कन चाहे सरकारले उनीहरुलाइ फर्काउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
विभिन्न चरणमा २५ सय नेपालीलाई नेपालीलाई विदेशवाट ल्याउने प्रतिवद्धता अनुसार वर्मावाट शुक्रवार २६ नेपाली आउन लागेका हुन् । पहिलो पटक बर्माबाट २६ जना नेपाली लिएर म्यानमारकै सैनिक जहाज शुक्रबार काठमाडौं आउने बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार बर्मामा कार्यरत नेपालीहरू पछिल्लो समय काम नभएर अलपत्र परेपछि उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन लागिएको हो । त्यसका लागि सरकारले राखेको सर्त अनुसार उनीहरु आउन लागको हुन् । सरकारले नेपाल फर्कने चाहनेले हवाइ भाडा आफैले बेहोर्नु पर्ने र नेपाल आइसकेपछि होटलमा क्वारेन्टिन बस्न चाहे त्यसको खर्च पनि आफै बेहोुर्न पर्नेछ ।
तर यो पटक भने आफ्ना नागरिक लिन वर्मावाट आउन लागेको विमानले नेपाली नागरिक ल्याउन लागेको हो । यसैबीच शुक्रबार नै संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट चार्टर्ड विमानमा २१० जना नेपाली लिएर काठमाडौं आउने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले विभिन्न देशमा समस्यामा परेका श्रमिक, विद्यार्थी र अन्य नागरिकलाई नेपाल फर्काउने योजना बनाएको छ । उनीहरुलाई नेपालकै विमान चार्टर्ड गर्ने तथा सम्बन्धित देशका विमान कम्पनीबाट ल्याउने दुवै प्रक्रिया पूरा गरी उडान अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । वर्मावाट आउने नेपालीहरुलाई महिला बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङले विमानस्थलमा उत्रिएपछि सुरक्षा निकायसंगको समन्वमा बसुन्धरास्थित यति पार्टी प्यालेसमा लैजानेछन् । त्यहाँ सरकारले होल्डिङ केन्द्र बनाएको छ ।
आज पनि थपियो ३३४ जना काेराेना संक्रमित